नयाँ वर्ष, नयाँ प्रण- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
नयाँ वर्ष, नयाँ प्रण
काठमाडौँ — असंख्य सम्भावना बोकेर २०७५ साल हाम्रो जीवनमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालीका लागि नयाँ वर्ष भनेको वैशाख १ गते नै हो । हरेक सालको यो पहिलो दिन हामी खानपान, रमझम, घुमफिर र रमाइलो गरी मनाउँछौँ । केही दिन नयाँ नौलो गर्न खोज्छौं ।
त्यसपछि ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ भनेझैं पुरानै बानी, चालचलन र रीतिरिवाजमा व्यस्त हुन थाल्छौँ । ओशो रजनीको भनाइ छ– ‘मानिसलाई नयाँ ज्ञान सिकाउन सजिलो छ तर पुरानो आदत हटाउन ज्यादै कठिन हुन्छ ।’ नयाँ वर्षको आगमनसँगै साल परिवर्तन हुन्छ, उमेर परिवर्तन हुन्छ तर के हाम्रा नराम्रा आदत पनि परिवर्तन हुन्छन् ?
गएको साल हामीले जुन–जुन काम समय र जीवनको महत्त्व नबुझी गरेका थियौँ, अब पनि त्यसलाई दोहोर्‍यायौं भने नयाँ वर्ष आउनु मात्रले खासै केही फरक पार्दैन । बिहानीको सम्बन्ध आँखा खुल्नु र जागा हुनुसँग हुन्छ । उठेर पनि समय र जीवनको महत्त्व बुझिँदैन भने त्यसलाई जागेको भन्न मिल्दैन । नयाँ वर्ष पनि त्यस्तै हो । यो हामीले आफ्नो क्षमतालाई बुझ्ने र विगतका कमीकमजोरी सुधार्ने एउटा सुनौलो अवसर हो ।
हाम्रो नयाँ वर्ष वसन्त ऋतुमा आउँछ । वसन्त आउँदैमा बगैँचा हराभरा हुन्छ नै भन्ने छैन । त्यसका लागि फूलहरू रोप्नुपर्छ । मलजल गर्नुपर्छ । बिनाप्रयत्न त्यसै केही पनि हुँदैन । आफूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो सोच, योजना र कार्यान्वयनमै निर्भर गर्छ । त्यसका लागि नयाँ वर्षको सुरुमै दृढ संकल्पको खाँचो छ ।
हाम्रो जीवन सम्भाव नै सम्भावनाको भण्डार हो । सबै कुरा सम्भव छ । तर त्यसका लागि मनस्थितिअनुसार परिस्थिति र परिस्थितिअनुरूपको मनस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । हामीले बितेको वर्ष आफ्नो अनुकूल परिस्थिति बन्ला कि भन्ने आशै आशमा बिताएका हुन सक्छौंँ । तर आशाले मात्र केही हुँदैन । सपना साकार हुन कामै गर्नुपर्छ ।
सोचअनुसारको परिस्थिति बनाउन सही समयमा सही लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । भनिन्छ– भगवान् अचानक प्रकट भएर ‘१० सेकेन्डमा आफ्नो लक्ष्य बताऊ, म पूरा गरिदिन्छु’ भन्नुभयो भने हाम्रो जिब्रोबाट जे फयाट्ट उछिट्टिन्छ त्यही अन्तर्आत्माको आजाव नै वास्तविक लक्ष्य हो । अधिकांश मानिस यस्तो प्रश्नको उत्तर १० सेकेन्डमा होइन, पूरा जीवनमा पनि पत्ता लगाउन सकिरहेका हुँदैनन् किनभने उनीहरूलाई अरूको लक्ष्यमै रमाउने बानी परिसकेको हुन्छ । जसको आफ्नै लक्ष्य हुन्न, उसले अरूको लक्ष्यपूर्तिको माध्यम बन्नुको विकल्प पनि हुन्न । जीवनलाई आफ्नो तरिकाले जिउने हो भने लक्ष्य र योजना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि पनि नयाँ वर्ष उपयुक्त अवसर हो ।
हामीले कैयौं वसन्त बिताइसकेका छौँ । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने, अलिकति खुसी, केही दु:ख र गुनासोले जीवन रंगिएको छ । जीवनको कुन वर्ष परिणाममुखी बन्यो र कुन समय व्यर्थमा बित्यो त्यसको लेखाजोखा गर्ने उपयुक्त समय पनि यही हो । मैले अहिले जे गरिरहेको छु, योभन्दा पनि केही बढी गर्न र बन्न सक्ने थिएँ भन्ने चेत मनको अन्तरकुन्तरमा थोरै मात्र पनि छ भने त्यसलाई सही ढंगले विकसित गराउने योभन्दा राम्रो अर्को अवसर आउने छैन । त्यसैले नयाँ वर्षको अवसरमा प्रत्येकले अरूभन्दा जिम्मेवार, अनुशासित, जानकार र सर्वोत्कृष्ट हुने प्रण गरौँ । प्रण मात्र हैन, त्यसलाई योजना बनाएर कार्यान्वयन नै गरौँ । एक वर्ष आफ्नो परीक्षा आफैं लिएर हेरौँ । परिणाम कस्तो आउँदो रहेछ, हेराँै र समीक्षा गरौँ ।
सचेत र जिम्मेवार रूपमा भित्री मनदेखि गरिएको संकल्पले जीवनको गोरटो अवश्य बदलिनेछ । भविष्य सुन्दर बन्नेछ । नयाँ वर्षलाई खुसी–खुसीले स्वागत गरौँ । परम्परागत तौरतरिकामा थोरै फरकपन ल्याऔँ । लक्ष्य र योजनाका साथ अघि बढौँ । सबैलाई नयाँ वर्ष २०७५ को मंगलमय शुभकामना !
प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ १२:२१
ठूलासँगै साना खेलाडी
उद्घाटनका दिन राष्ट्रिय खेलाडीसँग करिब १५ मिनेट बाल खेलाडीले फुटबल खेलेका थिए । यसमा विभिन्न विद्यालयका गरी ५० जनाको सहभागिता थियो ।
काठमाडौँ — टेलिभिजनमा मात्रै फुटबल हेर्दै आएका विराटनगरको शिक्षादीप स्कुलका कक्षा ६ का विद्यार्थी विनम थापाले यसपालि आफ्नै ठाउँमा प्रत्यक्ष खेल हेर्ने मौका पाए । उनले आफ्ना साथीहरूसहित विराटनगरकै सहिद रंगशालामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सहभागी भएको खेलहरू बिजुलीको उज्यालोमा हेरेका हुन् ।
दर्शक त उनी भए नै, सँगसँगै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीसँग फुटबल खेल्ने अवसर पनि पाए । ‘निकै रमाइलो भयो,’ प्रतियोगिताभर सहभागी विनमले भने, ‘हामीले यसपालि खेलका ट्रिक पनि सिक्यौँ ।’ उद्घाटनका दिन राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग करिब १५ मिनेट बाल खेलाडीहरूले फुटबल खेलेका थिए । यसमा विभिन्न विद्यालयका गरी ५० जनाको सहभागिता थियो ।
सनसाइन सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा ४ का विद्यार्थी पीयूष बस्नेत, उनका साथी शिवम मण्डल, रोहन सुन्दास, शिक्षादीपका प्रज्ञान राजभण्डारीलगायत ‘साना खेलाडी’ ले प्रतियोगिताभरि खेलको मज्जा लिए । ‘परीक्षा सकिएको मौकामा हामीले फुटबलको मज्जा लियौँ,’ कक्षा ७ का विद्यार्थी प्रज्ञानले भने, ‘यहाँ सिकेको कुराले हामी आफूहरू खेल्दा सजिलो हुने भयो ।’
सुनसरीको इनरुवास्थित जनक स्मृति स्कुलको कक्षा ७ का विद्यार्थी सक्षम रेग्मीले पनि यसपालिको रात्रिकालीन खेलबाट मनोरञ्जन लिए । विराटनगरस्थित मामाघर आएका उनले यही मौकामा फुटबल खेल हेरेका थिए । राति खेल हेर्दा रमाइलो लागेको उनले सुनाए ।
वार्षिक परीक्षा सिध्याएर फुर्सदमा रहेकी स्वस्तिका विष्टले पनि आफ्ना दिदी र साथीहरूसित रंगशाला पुगेर फुटबलको मज्जा लिइन् । सगरमाथा स्कुलकी कक्षा ९ की विद्यार्थी स्वस्तिकाले नाम चलेका खेलाडीहरू सहभागी भएको खेल आफ्नै ठाउँमा हेर्न पाउँदा निकै रोचक अनुभव भएको सुनाइन् ।
खेल हेर्न विभिन्न दरका टिकट बिक्री गरिएको थियो । ७ वर्षमुनिका खेलाडीका लागि प्रवेश नि:शुल्क थियो । वार्षिक परीक्षा सकिएको समय भएकाले धेरैजसो बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँगै खेल हेर्न आएका थिए । राति खेल आयोजना गरिएकाले अभिभावकलाई पनि सहज भएको थियो । चैत १७ गतेदेखि सुरु भएको विराट गोल्डकप प्रतियोगिताभरि नौ वटा खेल भएका थिए ।
चर्चित नेपाली खेलाडीहरू विमल घर्ती मगर, नवयुग श्रेष्ठ, भरत खवास, अनन्त तामाङ, किरण चेम्जोङ, निराजन खड्का, बिकेश कुथू, एलेन न्यौपाने, सुनील वल, प्रकाश बुढाथोकी, जर्ज फिन्स कार्की, टंक बस्नेतका साथै केही टिममा विदेशी खेलाडीको समेत कौशल हेर्न पाएर बालबालिका दंग परेका थिए ।
फुटबल प्रशिक्षक तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष सन्तोष बानियाँ बालबालिकामा फुटबलप्रति रुचि हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । राष्ट्रियस्तरका खेलाडी सहभागी खेलहरू हेर्दा फुटबल खेल्न रुचि हुने बालबालिकाले धेरै कुरा सिक्न पाउने उनले बताए ।
प्रतियोगिताका हरेक खेल साँझ ६ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म ‘फ्लडलाइट’ मा खेलाइएको थियो । यसका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सहिद मैदानका विभिन्न ६ स्थानमा ६ वटा फ्लडलाइट राखिएका थिए । आयोजक समितिका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार फ्लडलाइटमा १ सय ५० वटा बत्ती बालिएका थिए ।
विराट गोल्डकप काठमाडौं बाहिरको सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशि भएको प्रतियोगिता हो । फाइनल खेलमा थ्रीस्टार क्बलले आर्मी क्लबलाई शून्यका विरुद्ध तीन गोल गर्दै च्याम्पियन बन्यो । विराट गोल्डकप उपाधि जित्दै उसले १२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र ट्रफी पाएको थियो । उपविजेता आर्मी टिमले ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पाएको थियो ।
प्रतियोगितामा नेपालका चर्चित टिमहरू मनाङ–मस्र्याङ्दी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल, त्रिभुवन आर्मी, थ्रीस्टार, रमपम झापा ११, संकटा र रिजालको मोरङ ११ ले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । भुटानको थिम्पु फुटबल क्लब र भारतको मोहमडन स्पोर्टिङ क्लब पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए । हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले १० हजार र म्यान अफ द टुर्नामेन्टलाई मोटरसाइकल दिइएको थियो । उत्कृष्ट गोलकिपर, मिडफिल्डर, डिफेन्स, बढी गोलकर्ता, उत्कृष्ट व्यवस्थापक, प्रशिक्षकलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो ।
तस्बिरहरू : वेदराज पौडेल
सानी परी र सानो बाबु